Meelaha safarka aan joogsiga lahayn ee loogu talagalay dadka hal-abuurka leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » Meelaha safarka aan joogsiga lahayn ee loogu talagalay dadka hal-abuurka leh
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Mexico • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Sri Lanka • Jebinta Wararka Thailand • Jebinta Wararka Safarka • Croatia News Breaking News • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Marka ay timaado safarka, qaarkeen baa jecel wax kale oo aan ahayn nasashada xeebta aan wanaagsaneyn; kuwa kale waxay jecelyihiin inay dhex galaan dhaqanka deegaanka; qaarna si fudud ayey u raadinayaan tacabur dhan walba ah. Haddii tan dambe ay tahay tan adiga ku khuseysa, markaa shaki kuma jiro inaad had iyo jeer baadi goob ugu jirto meesha kuugu xigta ee aad wax ka baareyso. Hagaag, xir boorsadaada, soo qaado GoPro-gaaga isla markaana qorsheyso safarkaaga xiga ee mid ka mid ah shantaan socdaal aan joogsiga lahayn ee loogu talagalay dadka xiisaha leh.
Dal macbudyo dahabi ah leh, dhagxaan dhagaxyo leh iyo xaflado duurjoog ah; Thailand waxay bixisaa isku-dhafka ugu fiican ee madadaalada, xiisaha iyo xiisaha. Ku dhex gal tareenka ka soo raacaya tuk tuk magaalada mashquulka badan ee Bangkok, ku dhex lugee kaymaha cowska badan ee woqooyiga Chiang Mai buuro ama ka soo bood jasiirad ilaa jasiirad doonta koonfureed ee dalka. Xawaaraha nolosha waa mid deg deg ah halkan waana inaad ku raaxeysaneysaa raacitaanka.
Caan ka noqoshada waligeed, wadanka neefta qaadanaya ee Croatia wuxuu hoy u yahay kuwa tacaburiya. Gaari ka kireeyo kayak oo soo hel Xeebta Dalmatian ee cajiibka ah, doomaha badda ee safafka ah ee ku wareegsan jasiiradaha quruxda badan ama fiiri dhammaan goobaha lagu duubayo taxanaha caanka ah, Game of Thrones. Ma ogtahay in magaalada taariikhiga ah ee Dubrovnik ay laban laaban tahay soo degitaanka Boqorka? Waxaa jira goobo badan oo la aqoonsan karo oo ka mid ah bandhigga dhibcaha ku leh waddanka oo dhan.
New Zealand waa waddan ku saabsan khibradaha shidaalka adrenaline-ka ah waxaana kugu adkaan doona quruxdeeda dabiiciga ah ee maskaxda, taas oo siinaysa dejinta waxyaabo badan oo cajiib ah. Waad ku safri kartaa waqooyiga iyo jasiiradaha koonfureed ee caanka ah Khibrad Kiwi baska dalxiiska ee lagu boodboodo-hop-off ama, ujeedka ugu dambeeya, kireysto xero kambiyuutar oo wax ku sahmi xawaarahaaga. Ku bood bood boodka ku yaal Queenstown, ku dul sababa boholaha Waitomo Glowworm oo u koco xagga sare ee glaz-ka Franz Josef.
Mexico waxay ku faantaa xeebo-ciida cad-cad, taariikh aad u fara badan iyo nolol habeennimo oo aan la arag. U fuul dusha sare ee tillaabooyinka Ahraamta El Castillo ee burburka Chichen Itza Mayan, khad-khad ka sarreeya treetops-ka Xplor ama si qoto dheer ugu quuso biyaha madadaalada cad ee cenote-ka dhulka hoostiisa ku teedsan ee ku teedsan Xeebta Yucatan Marka qorraxdu dhacdo, xafladda sii wado habeenkii oo dhan Coco Bongo oo ku taal Cancun.
Sri Lanka way yara yaraan kartaa, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo laga baaro jasiiraddan quruxda badan ee koonfurta Hindiya ka jirta. Kireysid hage khaas ah oo kaa kaxeeya kolba meeshii aad rabto si aad uga faa'iideysato khibradaada oo aad wax uga barato dadka deegaanka. Isagoo fuulaya xagga sare ee caanka ah Sigiriya qalcadda dhagaxa weyn ee qadiimiga ah waa lagama maarmaan u ah aragtiyaha cajiibka ah ee dusha sare. Sida safarka loogu sii marayo Beerta Qaranka ee Yala iyadoo la ilaalinayo maroodiyaasha, yaxaasyada iyo shabeellada.
Haddaba halkee bay noqon doontaa? Waxaan rajeyneynaa in mid ka mid ah meelaha kor ku xusan ay soo jiidatay dareenkaaga oo ay noqon doonto meesha ku xigta ee safarka ee ku jirta liiska baaldigaaga xiisaha badan